साउदीमा पोकेमनगो माथि प्रतिबन्ध किन? | Jukson
साउदीमा पोकेमनगो माथि प्रतिबन्ध किन?
७ साउन। साउदी अरवको धार्मिक मामलासम्बन्धि सर्बोच्च संस्थाले हालसालै सार्वजनिक गरिएको लोकप्रिय भिडियो गेम पोकेम्यान गोलाई प्रतिबन्ध लगाउन उर्दी जारी गरेको छ ।पोकेम्यान गो आधिकारिक रुपमा साउदी अवरमा उपलब्ध हुँदैन । साउदी अरवमा निक्कै रुढीवादी र परम्पदावादी समाज छ । तर थुप्रै मानिसले प्रोक्सी सर्भरको प्रयोग गरेर डाउनलोड गरी खेलिरहेका छन् ।
Pokemon Go banedयस संस्थाले सन् २००१ मा जारी गरेको उर्दीलाई फेरि लागू गरेको छ । त्यस समयमा पनि पोकेम्यानलाई प्रतिबन्ध लगाउन उर्दी जारी गरिएको थियो ।पोकेमन गो सन् १९९६ को निन्टेडो गेममा आधारित छ र यो अहिले संसारभर निक्कै चर्चित बनिरहेको छ ।
यस उर्दीमा भनिएको छ, ‘पोकेम्यान जुवासँग निक्कै मिल्दोजुल्दो छ र यो चार्लस् डार्विनको बिकास सिद्धान्तमा आधारित छ । जसलाई इस्लाम धर्मले मान्यता दिँदैन ।’
AN-32 aircraft of Indian Air Force goes missing; search operation launched
सरकारले तीन महिनाभित्र राजमुकुट सार्वजनिक गर्ने
दमौली पुग्यो युआरएल
चुनावी सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आज छलफल गर्दै